2010 IBritish ivulekile: njani iOosthuizen iWon eSt. Andrews
ULouis Oosthuizen wagijima ngo-2010 eBritish Open , ephumelele ngemivumba eyisixhenxe kwi- Old Course yase-St Andrews.
Umninimzi: uLouis Oosthuizen, 272
Imihla: Julayi 15-18, 2010
Indawo: I-Old Course eSt. Andrews eSt. Andrews, eScotland
Inombolo ye-Championship evulekileyo: Eli lixesha le-138 iBritish Open idlalwe.
UOosthuizen wavala njani iSango kwi-Open Field ye-2010
U-Oosthuizen wavala umqhudelwano ekulawuleni imfashini, kodwa uRory McIlroy waqala ngaloo ndlela.
Ngomjikelezo wokuqala, uMcIlroy wabopha ibhola eliphambili elinengxelo engama-18 kunye nomyinge we-63. Kodwa kwinxalenye yemini yomdlalo we-second round, umdlalo onamandla wawubhuqa kwi-Old Course. Umoya wawomelele kangangokuba wayeka ukudlala kwithuba elithile emva kweebhola zegalufu kwiindawo ezithile zokuqala ukuqala ukugubha okanye ukuvuthela.
UMicIlroy wadlala kulolo hlobo lwesibini, waza walandela ukuvula kwakhe engama-80 kunye ne-80. Kodwa u-Oosthuizen, ke, wayenenhlanhla ngodonga lwasemva, wadlala kwiimeko ezibhetele (nangona zibetha), kwaye wadubula 67.
U-Oosthuizen wathatha umqhubi wezothutho emva kwesikhozo sesixhenxe kwinqanaba lakhe lesibini, kwaye akazange alinike. Waholwa ngamashumi amahlanu emva ko-2 ukuya kwe-2 kunye no-4 emva kwe-Round 3. U-Paul Casey wayengumdlali amane emva kokuya ejikelezweni lokugqibela, nabo bonke abanye bebuya phambili (ekufutshane-kufuphi noMartin Kaymer, ezisixhenxe emva kwe-Oosthuizen).
U-Casey wahlala enxibelelana nenkokheli ngelokuqala kwinqanaba lakhe, kodwa ithuba likaTyyy's tournament lihlangene nelo xesha liye lahlaselwa xa ephindwe kathathu.
U-Oosthuizen, u-Nombolo engu-54 kwihlabathi ekuqaleni komqhudelwano kunye kunye nokuphumelela kweTuro yeYurophu kwi-credit yakhe ngeli xesha, egcinwe ngokukhawuleza kulo lonke ujikelezo olugqibela. Waqhubela u -4 nge- 9 eluhlaza waza wenza ukhozi lubeke. Kuphela i- bogey kwi- Nombolo 17 Road Hole inqande u-Oosthuizen ukudibanisa irekhodi lomqhubi wamanqaku omninzi wokunqoba.
U-Lee Westwood wagqiba isibini, uMcIlroy wabuyisela kwintlekele yakhe yesibini ukubopha kwisithathu.
Nangona eli lixesha lesi-138 le midlalo yadlalwa, kwakuyiminyaka eyi-150 yokusungulwa kwe-Open Championship. Inkulu yokuqala yeGalofu yaqala ukudlalwa ngowe-1860.
Ngo-2010 iBritish Open Open Tournament Scores
Iziphumo ezivela kwi-2010 yeBritish Open Open tournament edlalwa kwi-72 ye- Old Course eSt. Andrews eSt. Andrews, Scotland (a-amateur):
ULouis Oosthuizen 65-67-69-71--272 $ 1,011,840
URory McIlroy 63-80-69-68--280 $ 305,536
UHenrik Stenson 68-74-67-71--280 $ 305,536
URobert Rock 68-78-67-69--282 $ 144,336
UNick Watney 67-73-71-71--282 $ 144,336
UMartin Kaymer 69-71-68-74--282 $ 144,336
ULuka Donald 73-72-69-69--283 $ 97,216
-Jin Jeong 68-70-74-72--284
URobert Karlsson 69-71-72-72--284 $ 68,076
USergio Garcia 71-71-70-72--284 $ 68,076
UDustin Johnson 69-72-69-74--284 $ 68,076
UStephen Gallacher 71-73-70-71--285 $ 49,997
UMarcel Siem 67-75-74-70--286 $ 37,200
URobert Allenby 69-75-71-71--286 $ 37,200
UShane Lowry 68-73-71-75--287 $ 26,189
UBo Van Pelt 69-72-73-74--288 $ 20,386
URicky Barnes 68-71-72-77--288 $ 20,386
ULucas Glover 67-76-70-76--289 $ 16,377
UDanny Chia 69-77-74-70--290 $ 14,761
Zane Scotland 70-74-72-74--290 $ 14,761
Usuku lweJason 71-74-75-71--291 $ 13,987
Peter Senior 73-71-74-73--291 $ 13,987
UMarc Leishman 73-71-72-75--291 $ 13,987
UColin Montgomerie 74-71-74-73--292 $ 13,273
USteven Tiley 66-79-73-74--292 $ 13,273
UFredrik Andersson Hed 67-74-73-78--292 $ 13,273
UMark Calcavecchia 70-67-77-80--294 $ 12,856
URichard S. Johnson 73-73-76-73--295 $ 12,678
UThomas Aiken 71-73-77-74--295 $ 12,678
UZach Johnson 72-74-74-76--296 $ 12,440
6 Okugqithisileyo kunye ne-9 ezigqithisileyo zokuLawulwa kweeLines Xa ufuna ukulahla omnye umntu
Imephu yeeTectonic Plates kunye neMida yazo
IiNkonzo zoNgcaciso zamaSulumane